Maxay yihiin istaraatiijiyadaha ugu fiican ee raadinta mashiinka raadinta?
Marka la tixgelinayo SEO sida farsamooyin dhamaystiran ee farsamooyinka leh ujeedada ugu dambeysa ee ah in aad hesho boggaaga sare ee liiska SERPs, waxaa jira saddex xeeladood oo istaraatijiyeyn ah udoonida raadinta. Waxaa loo adeegsadaa qaybta libaax ee ganacsiyada awoodda kala duwan, iyadoo ay shirkadaha yar yar ay si xamaasad leh u billaabaan inay internetka ka bilaabaan bilowgii hore, ama kuwa horey u soo gaadhay natiijooyin qancin ah ee ganacsiga jilicsan iyo macaamil dhaqameedka iyo dareemida baahida si aad u sii socotid oo aad ubaahato internetka.
Haddii aad doonaysid inaad isku tijaabiso SEO-ga DIY, ama aad horey u heshay go'aanka si wanaagsan loo sameeyay si ay u caawiso kooxdii waayeelka ah ee khabiirada warshadaha, waa inaad ka warqabtaa saddexda istiraatiijiyadood ee raadinta aasaasiga ah ee aasaasiga ah. Kaliya maskaxda ku hay ka hor intaanad bilaabin helitaanka boggaaga.
Waa sahlan tahay in la helo
Aan ku bilowno White Hat SEO, sida farsamooyinka loo aqoonsan yahay oo loo adeegsan karo, oo ka fog inteeda kale istaraatiijiyadaha istaraatijiyeynta raadinta. Dalbashada White Hat SEO-ka micnaheedu waa in ay ku shaqeysiiyaan in ay sare u qaadaan taxanaha raadinta boggaga internetka, si adag u raacaan tilmaamaha iyo talooyinka ay sameeyeen Google laftiisa. White Hat SEO wuxuu ku qeexayaa qorshe hawleed oo caddaalad ah oo aan xadidnayn, sida horumarinta waxyaabaha tayada leh, samaynta xidhiidh haboon (aan la bixin). Haa, waxay noqon doontaa shaqo adag in la sameeyo. Inkastoo, doorashada habboon ee White Hat SEO-ga micnaheedu waa inaad dareentay inaad hubto oo aad ku tiirsan tahay marmarka qaar oo aad u yar oo si tartiib tartiib ah, laakiin horumarka sii socota ee muddada dheer.
Isbedelka dhinaca mugdiga ah
Sida habdhiska khatarta ah ee xeeladaha White Hat SEO, Istaraatiijiyadaha istaraatiijinta raadinta Black Hat raadinta natiijooyin badan oo ah halkii ay ka fiicnaan lahaayeen cayaartoy daacad ah. Black Hat SEO wuxuu isticmaalaa nidaamyo farsamo oo kala duwan si uu uga faa'iidaysto dhibco dhab ah oo dhabta ah ee google-ka raadinta algorithms. Hadafka koowaad, si kastaba ha ahaatee, waa isku mid ah - helitaanka heerar sare ee bogagga shabakadda. Talaabooyinka dhinaca mugdiga ah waxay ku siin karaan wax aan la saadaalin Karin, marmarka qaarkoodna xitaa khatar ah, hase yeeshee si dhaqso ah ayey ugu guuleeysteen. Sidaa oo kale, Black hat SEO caadi ahaan waxay ku socotaa si xun u isticmaalka spam isku-xirka, qarsoodi ah qarsoodi ah ama dhejis ah, keyword keywords iyo xadgudubyo kale.
Waxaa jira gaaban loo yaqaan "Gray Hat SEO", taas oo si kooban u dhigaysa natiijooyinkii ugu fiicnaa labada istiraatiijiyadood ee ugu muhiimsan raadinta kaliya ayaa eegay. Xaqiiqdii, A xigti xigeenka Gray Hat SEO wuxuu loola jeedaa isticmaalka xeeladaha sharci ee ugu waxtarka badan marka ay suurtogal tahay, iyaga oo ku kicin kara qaar ka mid ah xad-gudubyada rajo-gelinta ah ee aan wali la isticmaalin. Habkaas, mid ayaa heli kara horumar macquul macquul ah, iyada oo aan la bixin khatar aad u badan in lagu qabto jebin iyo ganaaxi Google.
Dabcan, doorashooyinka u dhaxeeya istiraatiijiyadaha istimaal celinta mashiinka raadinta waa inay ahaadaan doorashada shakhsi ahaaneed ee shakhsiga. Adiga ayaa go'aan ka gaaraya sida aad u dhaqmeyso. Xasuuso hal wax yar - ka faa'iideysashada dhibcaha daciifka ah ee algorithms raadinta waxay u muuqan kartaa mid aad u soo jiidasho leh kuwa raadinaya kaliya horumarka heerka sare. Laakiin Google weli waa isha ku hay internetka. Marka, marka la ciyaarayo ciyaar khalad ah, xasuuso in la ciqaabi karo wakhti kasta, laga bilaabo ciqaabta rikoorka fudud, iyo illaa ka noqoshada maamulka domainka oo dhan Source .